Lapho ebuzwa ukuthi kungani uhulumeni kudingeka izingalo, ungakwazi ukuphendula noma imiphi umfundi. Lolu phawu kuboniswe imibhalo esemthethweni, olwenziwa ku zemali. Ngokuvamile elingenamikhono izingalo kuyingxenye izibonakaliso izinhlangano ezehlukene kanye amafemu ezentengiselwano. Omunye sibheke uphawu isimo ulahlekile ukuze akwenze kucace ukuthi yiliphi izwe ehilelekile. Abaningi uyazi ukuthi kubukeka sengathi elingenamikhono izingalo Ukraine, kodwa kusho ukuthini?
Bangaki izinhlamvu kuleli zwe?
Heraldry - kuyinto wesayensi oyinkimbinkimbi futhi yehlukene kaningi okubalwa futhi yimuphi umlingisi akusiyo ngephutha. Ngisho ne ukuthuthukiswa of amajazi umndeni izikhali wacabangisisa ngokusebenzisa yawo wonke amakhemikhali. Hhayi kunzima ukuqagela ukuthi isibonakaliso isimo - akuyona nje iqoqo izinhlamvu. Kuze kube manje, Ukraine has ezimbili amajazi izikhali: ezinkulu nezincane, kodwa ngokusemthethweni kuphela wasebenzisa yesibili. On ingemuva blue ubonisa Trident igolide - uphawu amandla nobukhulu bakhe ePrince uVladimir. Futhi lisebenzisa lesi sithombe njengoba ababusi lokuphrinta le Rurik lwamakhosi. elingenamikhono elikhulu izingalo Ukraine waqeda Cossack nge musket omelela amandla Zaporizhia Army. A isibonakaliso ezingcono ingakamiswa ivunyiwe, kepha ukhona ngesimo imithetho ezisemthethweni. Ngaphandle ezimbili amajazi izikhali, kukhona e-Ukraine, kanye nanoma yimuphi omunye umbuso, ifulege ayo neculo lesizwe. On ukubaluleka ukuthi abalingiswa nje kubaluleke njengokugwema logo ingcaca. Maka futhi uhlanganiswa nokuzala Ukraine iyafana, benziwe imibala efanayo: blue and yellow.
Ethi Mysteries of the umlando kanye nemvelaphi
Akwaziwa nini futhi kanjani ijazi Ukraine izikhali lwenzelwe njengoba injalo manje. Kukhona nemibono eziningana, kodwa akukho ubufakazi obucacile somunye wabo. Ngokuqondene incazelo yesithombe, ukuze bathole amamaki amahle emsebenzini wesikole eyanele ukuze kuphenduleke elifanekisela elingenamikhono izingalo alotshiwe intando Trident. Ngokomlando, waqinisekisa ukuthi emndenini Rurik ngokuchichima esetshenziswa ezimbili prong futhi tridents njengezifanekiselo siqu. Usayizi nesitayela kubo ixhomeke isimo nobuntu zezimfanelo ezenza umuntu abe umbusi - uphawu yomnikazi. Kulokhu, lo Trident, okuyinto ehlotshiswe State Emblem Ukraine, eyaziwa njengoba isikhathi Svyatoslav. Ezinye izazi-mlando zikholelwa ukuthi uphawu ngaphezulu lasendulo.
Le nguqulo esemthethweni
Inani elikhulu abacwaningi sithambekele kulokhu kucabanga ukuthi Trident iyona monogram. Ngokusho kwale nguqulo, njengophawu wabhala igama elithi "Ingabe 'kanye obanzi kunayo yayo wasungula uVladimir Veliky. UMbusi kubalwa ngempela zemali nge ngomfanekiso wakhe ngakolunye uhlangothi kanti Trident ngakolunye. Nokho, imibhalo eqinisekisa khona igama elithi "Ingabe 'figure, asizange sisinde. Uma ubuka eduze, nohahelwa izinhlamvu ezine ungabona. Izazi-mlando ungavumelani lo mbono, ethi monogram akuyona ejwayelekile salokhu inkathi emlandweni yeRussia. Okunye ezimweni lapho mazwi abalulekile angena amatshwayo kwamandla, akwaziwa. Enye indaba ecatshangwe yesiteleka - isibonakaliso Ukraine ayikwazanga ukudalwa uVladimir kusukela ukuqinisekisile ukuthi uye wasebenzisa uyise kwesikhulu. Ngempela, Svyatoslav ephethwe Wahlukaniselwe okuyinto wawubonisa Trident. Sasebenzisa lolu phawu, kanye nezinye izikhulu eziningi lwamakhosi, ukushintsha ukunambitheka.
edume kakhulu yile okuthiwa imfundiso yokuziphendukela, nokuthi Trident lifanekisela ubunye guises ezintathu uNkulunkulu oyedwa. Futhi akusho ukuthi mayelana ukholo lobuKristu (nakuba imibono enjalo ikhona), e balabo abangasiwo amaKristu, lonkulunkulu yaziwa, has ezintathu isithombe. Ukubaluleka benkolo bangaleso uwuphawu Ukraine bavikela UProfesa Minko. Libhekisela usosayensi e-edume umlando Czech. Inganekwane ethile ithi eziningi abantu ngokushesha ngemva kokufika kwabakhi Baptist obaba eCzech Republic ufuna ukwamukela lolu kholo olusha. Njengoba abefundisi kwakungekho cross, isiko ukuqhutshwa ngeBhayibheli ihange lomkhumbi. Umlando Kuyathakazelisa, kodwa isiko yalesi isimo ihange engcwele ufanekiselwa incwadi "T" ebhalwe esiphendula esibhekisa phansi. Lesi sithombe ingcaca neze ufana Trident, imile izimpande eRussia. Labo ungavumelani lo mbono bathi umKristu akunakwenzeka ukuba ngibe ihange ukusebenzisa Svyatoslav yobuqaba. UVladimir ngaphambi kokubhapathizwa wayebuye umsekeli okholweni ubudala futhi ukusebenzisa Trident, waqala eside ngaphambi ushintsho kwezinye zezinkolelo zawo ezingokwesiko.
Indaba mayelana Falcon
Izincwadi zomlando eziningi walondoloza kukhulunywa inyoni yizicukuthwane njengoba iwuphawu ngokuhlakanipha kwesikhulu kanye namandla. Falcon e isiko Russian ayebhekwa Esivelele isibindi ezempi kanye nobulungiswa. Ngokusho ososayensi abathile, it is le nyoni lubhalwe ngemfihlo ku Trident engaqondakali. Symbol ngempela njengomuntu ngalé kwezindaba inyoni ngesikhathi dive inyamazane. namazinyo Lateral efana amaphiko eligoqiwe nenhloko emaphakathi sifana ngokulayisheka. Lo mbono iyona okungenani ethandwa, ke akubhekwa izincwadi. Kulokhu, nezitha lo mbono phikisana lutho. Ngisho nasezimweni ezikhululekile kungenzeka "Beka" ngokuvamile kakhulu igama elithi "ukhozi" abantu nokunqunywa izimo kuwo asetshenziswa lapho bekhuluma ukuze igama elithi "isikhulu". Nokho, obubhalwe ubufakazi bokuthi elingenamikhono izingalo Ukraine kuhlanganisa isithombe le nyoni ayitholakali.
Lapho Ukraine sivunyiwe uphawu?
Umlando walo yesimanje iqala elingenamikhono izingalo ngo-1917. Wasikisela ukwethula lokhu uhlamvu M. S. Grushevsky, ngaleso usihlalo nesikhathi Central Council. Ukukhetha sezombangazwe isici wachaza ukuthi lokhu ukuphrinta uVladimir. Okuqakathekileko yokuthi Hrushevsky kwaba nesazi-mlando. Kuvunyelwe futhi ngokusemthethweni obonwa Rada kwaba elingenamikhono izingalo ngo-1918. Kwakukhona embodiments okunye, isibonelo, ukukhothama noma CROSSBOW esetshenziswa ku Rus ku lwezimpawu. Ngesikhathi esifanayo wanikeza Cossack nge musket, abakhona namuhla ijazi elikhulu izingalo. Le nguqulo yokuqala kwaba Trident legolide ezungeze umhlobiso yayo oluhlaza.
uphawu umbuso Ukraine SSR
Phakathi nenkathi yokudlondlobala kwamandla Soviet, izifanekiselo wonke ama-republic ayefana. izinguquko ezithintiwe futhi uhlamvu Ukraine. Mina uyishintshe kathathu. Kodwa zonke izinketho izithombe ayefana. On isihlangu obomvu nge kwelanga zazinesithombe sesando isikela, insephe ngezindlebe segolide. Umlando Ukraine lesiTjhaba enkathini esukela ku-1929 kuya ku-1991 ayegcwele kanye. It sishintsha uphawu hhayi kuphela jikelele isitayela, kodwa futhi okucashunwe eteyipini, eluka kufihlizwe. Inketho yokugcina iyona elingenamikhono izingalo Ukraine SSR babengenalo yombhalo oqoshiwe. Ukubaluleka lena akuyona kunzima ukuwuqonda ubunjalo isimo. Isitatimende esimfushane sifundeka kanje: ". Bonke abantu abasebenza bangaphansi lokuvikeleka kwezifiso ezisemqoka ezingumphumela iRed Army futhi uhulumeni fair"
Nothayi banamuhla ijazi Ukraine izingalo
Ngemva kokuwa Soviet ngo-1991, e-Ukraine entsha kwakukhona nezinhlamvu ezintsha ziyadingeka. Kodwa kungani ubudala Trident wakhethwa? Namuhla, umbuzo uyini elingenamikhono izingalo Ukraine, ungaphendula noma yisiphi isakhamuzi yezwe. Uphawu oyinhloko isimo sifana nje ubukhulu bakhe kodwa zabona futhi umlando onothileko. Kukholakala ukuthi lokhu elingenamikhono izingalo ukuthi mazibuyiselwe igcizelele endulo yezwe. Ngezenzo ukusebenzisa lolu uphawu oluthile njengentelezi, "uphawu uVladimir" imisinga eminingi ubuzwe. Ukwamukelwa ijazi elikhulu izingalo elisavulekele. Umthethosisekelo isimo sendlala ukutholwa yayo khulumela 2/3 Ukwakheka wePalamende. Sketch isikhathi eside athuthukile, kodwa uhlamvu akanawo igunya lomthetho futhi engakaze ligunyazwa ngokusemthethweni. On ijazi elikhulu izingalo, ngaphezu amancane Cossack nge musket lalimelele ingonyama, umqhele, izindlebe kanye nezinye izinto.
elingenamikhono Ukraine izingalo: umlando kanye namuhla
Njenganoma ezinye izimpawu esemthethweni isimo, ijazi elincane izingalo kabanzi. It kungabonwa timphawu lempi, ama-passport zezakhamizi, nokulawula ukusetshenziswa elingenamikhono izingalo nezimpawu kwezikhungo zikamasipala. Lindela izinguquko ijazi elincane izingalo akudingekile. Kubukeka yokuqala, naphezu alula. I wabanjwa kakade futhi bevumelana, okuyinto efana kakhulu izakhamuzi isimo. Njengoba for the version enkulu, lapho ziyokwamukelwa futhi uzoqala ingasetshenziswa ngokusemthethweni ukuqagela kuphela. Kulokhu, indaba emfushane yasungulwa isikhathi eside, futhi kuyabonakala namuhla. Emblem Ukraine, isithombe ungabona, ngokuhamba namuhla. Kodwa kuphela njengophawu non-zokuhlobisa. Kulesi sisekelo, umlingisi encane ivikelwe futhi ingasetshenziswa kuphela ngokuhambisana nemithetho ekhona. Ukuze ukusetshenziswa ngokungemthetho ijazi elikhulu izingalo noma isimo sengqondo sokungawahloniphi kuye nengalo yomthetho kunzima kakhulu. Into wukuthi lesi sithombe ngokomthetho ayibonwa njengoba iwuphawu isimo. Ngenxa yalesi sizathu, osopolitiki abaningi ukukhuluma ngesidingo isinqumo ekuqaleni kule ndaba. Kungenzeka ukuthi wathola ingubo enkulu izingalo Ukraine kuthanda esikhathini esizayo esiseduze.
Isigaba 77 soMthetho Wobudlelwano Ikhodi WaseRussia: ukuqedwa kwenkontileka umsebenzi. Amazwana
I Sofitel Dubai I-Palm (UAE / Dubai): incazelo ehhotela, kanye nokubuyekeza